Chii Musoro weChisimbiso?
Seal Musoro unoshandiswa kuvhara kupera kwechigadziro kuitira kuti zvemukati nekunze midhiya yekuzviparadzanisa zvinhu, inozivikanwawo seyekupedzisira butiro.Ichikamu chemudziyo uye chakabatana nesilinda nekumonera. Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzejometri, inogona kukamurwa kuve hemispherical, ...
Mhedzisiro yekupisa kurapwa maitiro pane echimakanika zvivakwa zvesimbi zvinhu
Kuchenesa kupisa simbi inzira iyo iyo simbi workpiece inodziyirwa kune yakakodzera tembiricha mune imwe svikiro, uye ndokutonhora kumhanya kwakasiyana mushure mekuchengetwa BAI mune ino tembiricha kwenguva yakati yenguva. maitiro akakosha mumishini ...
Sei kusarudza zvemaziso zvikamu zvinhu?
Zvimakanika zvikamu zvinoreva chinhu chakakosha chikamu chemuchina, senge mabhaudhi, sikuruu, makiyi, magiya, shave, pini dzemuchirimo, nezvimwe. BAI michina zvikamu zvakakamurwa kuita zvikamu zvakawandisa uye zvikamu zvakakosha Zvikamu zvese zvinoreva zvikamu zvinogona kuve zvakafararira inoshandiswa mumashini akasiyana siyana, akakosha zvikamu ...